Meghan King Edmonds anobvisa rin'i zvichitevera 'kudanana' kwemurume - Nhau
Kuru Varaidzo Nhau Blog Macelebs
Meghan King Edmonds anobvisa rin'i zvichitevera 'kudanana' kwemurume
Pane Meghan King Edmonds ari kuedza kutiudza chimwe chinhu?
NeChipiri, pakati pekunyepedzera kwemurume wake, aimbove 'The Real Housewives weOrange County' nyeredzi akatumira selfie ku Instagram, asi aive asina chinhu chinowanikwa - ringi yake yemuchato.
Iwo akanaka @meghankedmonds mune yedu yepamusoro yeLena (yatengeswa kunze, asi paodha zvakare, saka taura nesaizi uye zita) uye Laine zvikabudura (pombi kuti utenge).
Chinyorwa chakagovaniswa na & (@mulberryandking) paJune 18, 2019 pa6: 32 am PDT
Isati yasvika iyo selfie, Meghan akange asingawanzoonekwa asina yero yero-yakaita pearoni yekudyidzana mhete yaakawana kubva kumurume wake, mukuru we baseball Jim Edmonds. Muchokwadi, mune snap iye aisaratidzika kunge akapfeka chero chishongo, uye haana kuzvitaura mumusoro wake. Akaita, zvakadaro, zvinoreva kuti zvese hazvina kukwana muhupenyu hwake, sezvo akatenda online mutengesi wezvipfeko Mulberry & King 'nekundimanikidza kuzvichengeta.'
Hupenyu hwepamoyo hwaMeghan hwakafanira kumiswa svondo rapfuura mushure mekunge webhusaiti yaburitsa nhaurirano dzinofungidzirwa Jim aive nemukadzi anozivikanwa sa' baseball madame. '
Aimbova St. Louis Cardinal akaudza Us Weekly kuti 'akange apererwa nekutonga' uye akaita 'hurukuro isina kukodzera' nemukadzi, asi anopikisa kuti pakange pasisina hukama hwepanyama.
Mushure meizvozvo, Meghan akaputira murume wake pane rake blog , achiti haachakwanisa kuvimba naye uye kuti 'aparara.'
'Ndakadana Jimmy uye akandireurura kuti akange achinjana mafoto akashata nemukadzi uyu mukati memwedzi yakati wandei uye hukama hwepanyama hauna kumbobvira hwavapo,' akanyora kudaro Meghan. 'Akamubhadhara kuti andidzivirire kuti ndisazozviziva.'
Akaenderera achiti, 'Ndinomutenda here? Handizivi. Nekuti handichavimbi naye futi. Panyama kana kwete, anga achine nyaya uye anozvibvuma kwandiri. '
Zvichida chokwadi chekuti Meghan haana kupfeka ringi yake yemuchato hachifanirwe kuuya sechishamiso, sezvaakanyora, 'ringi yangu yemuchato inomiririra kubiridzira.'
Meseji yega yega, Meghan akanyora, 'inomiririra sarudzo yake yekukanda muchato wedu mumarara.'
'Ini handina basa neupenzi hwangu hukuru imba, ini handina basa nemota yangu nyowani, handina hanya nemadhaimani angu. Zvinorevei chimwe cheicho kana ini ndisingakwanise kuwana zvinodikanwa zvakanyanya? Hazvina zvazvinoreva. Utsi nemirazi, 'ivo' Vanamai vemba 'alum akanyora. 'Munhu mumwechete angafunga sei kundiparadza zvachose? Hazvina kunaka.'
MTV nharo kutema zita raMichael Jackson kubva kuVMA Vhidhiyo Vanguard Mubairo: Gwaro
'Vanotamba Moms' vanogamuchira Abby Lee Miller vanonzi vari kutanga kusunungurwa mutirongo
keshia knight pulliam vabereki mafoto
chii chirikuitwa naJames jesi nhasi
joseph baena munyoro patricia baena
mifananidzo yaJulia roberts vana